Why Videos Corporate Videos Na-efu Mark, na Ihe Do Ga-eme Banyere Ya | Martech Zone
Anyị niile maara ihe mmadụ pụtara mgbe ha kwuru "vidiyo ụlọ ọrụ." Na tiori, okwu a metụtara vidiyo ọ bụla ụlọ ọrụ mere. Ọ na-abụbu onye nkọwa na-anọpụ iche, mana ọ bụghị ọzọ. Bọchị ndị a, ọtụtụ n'ime anyị na ahịa B2B na-ekwu ụlọ ọrụ vidiyo jiri ntakịrị ihe ọchị.
Nke ahụ bụ n'ihi na vidiyo nke ụlọ ọrụ adịghị mma. Vidio ụlọ ọrụ mejupụtara eserese ngwaahịa nke ndị ọrụ ibe anyị mara mma akwado n'ime ụlọ nzukọ. Corporate video atụmatụ a sweaty CEO na-agụ ngbasapụ isi a teleprompter. Corporate video bụ ihe omume recap na-amalite na ndị mmadụ na-achọta aha ha baajị na tebụl na-ejedebe na a kụrụ aka na-ege ntị.
Na nkenke, vidiyo nke ụlọ ọrụ na-agwụ ike, adịghị arụ ọrụ, na mmefu nke mmefu ego gị.
Ndị ọrụ anaghị achọ ịga n'ihu na-eme ụlọọrụ vidiyo Dị ka onye na-azụ ahịa, ị nwere ike ịhọrọ ịme vidiyo ndị na-adọrọ mmasị, dị irè, ma weta ezigbo nsonaazụ.
E nwere ụzọ ihe atọ dị mkpa iji soro ịmalite njem gị ụlọ ọrụ vidiyo banye n'ime irè video ahịa:
Malite na atụmatụ.
Tinye ego na ihe okike.
Tụkwasị ndị na-ege gị ntị obi.
Nzọụkwụ 1: Malite na Strategy
kasị ụlọọrụ video atụmatụ na-amalite na anọ dị mfe okwu: Anyị chọrọ vidiyo. Ihe oru ngo a malitere site na ndi otu ugbua ekpebisiwo na vidiyo bu ihe a choro na ihe ozo bu ime ihe.
O di nwute, ima elu n'ime imeputa vidiyo na-eme ka ihe kacha mkpa. A na-amuta vidiyo vidiyo site na enweghị usoro doro anya, raara onwe ya nye vidiyo. Otu ndi ahia gi agaghi abanye n’ime onodu ohuru ma obu nkwado ihe omume n’enweghi atumatu na ebumnuche doro anya, yabụ gini mere vidio ji di iche?
Ihe Nlereanya: Umault - tọrọ atọ na Video Corporate
Tupu ịmalite ịbanye na vidiyo, wepụta oge iji rụọ ọrụ site na usoro maka vidiyo. Ma ọ́ dịghị ihe ọzọ, gbalịa hụ na ị ga-azali ajụjụ ndị a:
Gịnị bụ ebumnobi vidio a? Ebee ka ọ dabara na njem ndị ahịa gị? Otu n'ime mmejọ kasịnụ na-eduga ụlọọrụ vidiyo anaghị akọwapụta ebe vidio ahụ dị na olulu ahịa. Vidio na-arụ ọrụ dị iche iche na ọkwa dị iche iche nke njem ndị ahịa. Ihe nkiri vidio nke mbụ kwesịrị ịkpali ndị na-ege ntị ka ha nọgide na-ekere òkè na akara gị. Ihe nkiri vidiyo nke oge gara aga kwesịrị ime ka obi sie ndị ahịa ike na ha na-eme mkpebi ziri ezi. Gbalị ijikọta ụzọ abụọ na-eduga na a nsogbu adịghị.
Kedu ndị na-ege ntị maka vidiyo a? Ọ bụrụ na ị nwere otutu onye zụrụ ya, gbalịa ịhọrọ naanị otu iji ruo otu vidiyo. Gbalị ịgwa mmadụ niile okwu agaghị ahapụ ịgwa onye ọ bụla okwu. Nwere ike ịme ọtụtụ nsụgharị vidio mgbe niile iji gwa ndị na-ege ntị dịtụ iche.
Olee ebe a ga-esi ele vidio a? Ọ na-anchoring a na peeji nke ọdịda, na-eziga na ozi ịntanetị oyi, na-emeghe nzukọ ahịa? Vidio bụ nnukwu ego, ọ dịkwa nghọta na ndị nketa chọrọ iji ya mee ihe n'ọtụtụ ọnọdụ dị ka o kwere mee. Agbanyeghị, vidiyo kwesịrị ikwu ma mee ihe dị iche iche dabere na onodu a ga-eji ya. Vidio dị na soshal midia kwesịrị ịdị mkpụmkpụ, kwụ ọtọ, ma nweta ikike ruo n'ókè iji mee ka ndị na-ekiri ya kwụsị akwụkwọ mpịakọta ahụ. Mpempe akwukwo ihu akwukwo gbara ya gburugburu site na inye ihe omuma nile nke olile anya.
Tụlee ịme ọtụtụ nsụgharị nke vidiyo maka ojiji dị iche iche. Nnukwu onye ọkwọ ụgbọala na-akwụ ụgwọ na ịmepụta vidiyo bụ ụbọchị (s) mmepụta. Extra oge nọrọ edezi a dị iche iche version ma ọ bụ ezubere iche cutdown bụ a na-eri-irè ụzọ na-extra agbara si gị ntụpọ.
Iwere oge iji dokwuo anya usoro gị, ma ya na ndị otu gị ma ọ bụ gị na ụlọ ọrụ gị, na-eme ka ihe vidiyo ahụ kwesịrị ikwu na ime. Naanị nke ahụ na-ewe nnukwu nzọụkwụ na mpaghara "ụlọ ọrụ", n'ihi na ị ga-ahụ na vidiyo nwere ozi doro anya, lekwasịrị ndị na-ege ntị anya, na ebumnuche.
Nzọụkwụ 2: Tinye ego na Okike
kasị ụlọọrụ vidiyo na-eme ka otu okpuru ike gwụrụ ugboro ugboro. Onu vidiyo ole ị huru na-amalite site na anwu n'ile n'elu uwa, wee banye na uzo uzo na ndi mmadu na-aga ije, na-egosi Njikọta? Ee. Vidio ndị a dị mfe ịme ma dị mfe ire usoro ịme mkpebi, n'ihi na ị nwere ike tụọ aka otu nde ihe atụ nke ha. Ndị asọmpi gị niile emeela ha.
Ma nke ahụ bụ kpọmkwem ihe kpatara na ha adịghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ndị niile na-asọmpi gị nwere vidiyo n'otu ụdị ahụ, kedụ otu ị ga-esi atụ anya atụmanya ịcheta nke gị? A na-echefu vidio ndị a ozugbo elechara ya. Ihe ndi n’acho anya n’eme nchoputa ha na ichoputa gi na ndi gi na ha n’agba mpi. Nke ahụ pụtara ikiri vidiyo gị ozugbo asọmpi gị. Kwesịrị ịmepụta vidiyo na-eme atụmanya icheta gị.
Ọ bụrụ n ’ime ihe omume ụlọ akwụkwọ gị ka ị mepụtara wee mepụta usoro vidiyo zuru ezu, ịnwere ike ịnweworị echiche nke ụzọ ga-eme ka ozi gị gabiga. Ihe dị ukwuu banyere usoro vidiyo bụ na ọ na-ewepu nhọrọ okike site na esemokwu. Iji maa atụ, ozugbo ị matara ịchọrọ ịme vidiyo mkpebi Mkpebi maka CIO na ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ, ị nwere ike ịme atụmatụ ịme vidiyo iji mee ka obi sie ha ike na ha nọ ezigbo ụlọ ọrụ. Nwere ike iwepu atụmatụ ọ bụla iji mee vidiyo vidiyo ọhụụ ma ọ bụ ntụpọ mmụọ. Vidio ndị ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma na mbido ndị ahịa.
Ihe Nlereanya: Deloitte - Commandlọ Ọrụ Iwu
Echiche echiche ihe agaghị abụ oke ọhụụ Christopher Nolan. Ihe ị chọrọ ime bụ ịchọta ụzọ iji gwa ndị na-ege gị ntị okwu na-ekere oke na echefu echefu.
Itinye ego na ihe okike karịrị naanị echiche maka vidiyo. Vidiyo vidiyo B2B siri ike chọrọ ederede na ọhụụ doro anya nke edepụtara site na akụkọ akụkọ tupu mmepụta amalite. Vidio “ụlọọrụ” na - abụkarị a) enwetaghị ederede ma ọ bụ b) ndepụta nke ihe na - ekwu okwu na - edepụtaghachi ma tinye ya na usoro edemede.
Vidio ndị a na-edeghị ede nwere ike ịdị ike, dabere na akụkọ ịchọrọ ịkọ. Ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu maka ịgba ama ma ọ bụ akụkọ mmetụta uche. Ihe edeputaghi abughi nke oma maka nbuputa ahia ma obu ebe ozo. Mgbe echiche maka vidiyo bụ gbaa onyeisi ụlọ ọrụ ajụjụ ọnụ, mgbe ahụ ị na-outsourcing ihe na CEO na video nchịkọta akụkọ onye kwesịrị ibe ya ọnụ n'ime ihe cohesive. Nke a na - ebute ogologo oge ịwepụta post na isi ihe furu efu.
Ezigbo onye na - ede akwụkwọ nwere ike ime ihe ịtụnanya maka ịtụgharị isi okwu gị na usoro vidiyo. Ederede ederede vidio bụ ọkachamara ọkachamara na ọ bụghị ndị niile na-ede ederede nwere. Imirikiti ndị na-ede kọọpịcha bụ, na nkọwa ya, magburu onwe ha mgbe ha na-egosipụta ọdịnaya ederede. Ha abughi ihe di oke nkpa na ikwuputa ihe di n'ime ihe omuma. Ọbụlagodi na inwere ndị na-ede akwụkwọ n ’ụlọ ọrụ ịzụ ahịa gị, tụlee itinye aka na onye edemede edemede ọkachamara maka vidiyo gị.
Kwụpụ 3: Tụkwasị ndị na-ege gị ntị ntị.
Efuola m ọnụọgụgụ oge anyị nụrụ ụdị nke:
Anyị na-erere na CIOs. Anyị kwesịrị ịdị ka nkịtị ma ọ bụ na ha agaghị enweta ya.
Cheregodi? Na-ekwu na ndị ụlọ ọrụ ndị isi ụlọ ọrụ chọrọ ihe niile edere maka ha? Ọzọ, ị ga - ekwu na ndị mmadụ anaghị enwe mmasị na mgbagwoju anya ma ọ bụ akwụkwọ omimi.
Tụkwasị ndị na-ege gị ntị obi pụtara ikwere na ha maara ihe. Na ha dị mma na ọrụ ha. Na ha chọrọ ile ọdịnaya ndị na-atọ ha ụtọ. Ndị na-ege ntị maara na ọ bụ azụmahịa. Mana mgbe ị ga - ekiri mgbasa ozi, ị naghị ahọrọ ebe GEICO na - akpa ọchị na mgbasa ozi ụgbọ ala mpaghara akọrọ.
Ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị na-arụsi ọrụ ike (na onye na-adịghị), nye ha ihe kpatara iji wepụta oge na-ele vidiyo gị. Y’oburu na iweghachita ihe mgbata na ahia gi, mgbe ahu ha nwere ike ihapu ya kama. Vidiyo siri ike na-enye ndị na-ekiri ihe mere ha ga-eji 90 sekọnd nke ụbọchị ha na ya.
Vidio siri ike bụ nke na - eme ndị na - ege gị ntị, na - eme ka ha chee echiche, na - ewetara ha uru ọzọ. Ọ na-enye ihe na-enweghị ike ịtụtụkọtasị site na mpempe akwụkwọ ahịa ma ọ bụ infographic. Vidiyo B2B gị agaghị enwe ike iji PowerPoint dochie ya.
Ihe Nlereanya: Nuance - Anyị, Ndị Ahịa ahụ
Video Corporate toro nke ezigbo ebe. Dika vidiyo siri ike inweta karia ihe omimi, ulo oru choro ima elu. Ugbu a vidiyo ahụ bụ ihe achọrọ maka ahịa nke oge a, gbaa mbọ hụ na ị na -emepụta vidiyo na-eto ahịa ma weta ROI dị mkpa. ụlọọrụ video agaghị enweta gị ebe. Vidio nwere atụmatụ doro anya, ihe amamihe dị na ya, ma tụkwasịrị ndị na-ege ya ntị obi.
Budata ntuziaka anyị zuru ezu maka ndụmọdụ ndị ọzọ maka ịgbana ọnyà vidiyo nke ụlọ ọrụ:
Wzọ asaa iji zere ịme vidiyo vidiyo
Tags: azụmahịa vidiyoụlọ ọrụ vidiyoụlọ ọrụ vidiyo ahịadeloittenuanceUgboahịa vidiyovideo ahịa azumusoro mgbasa ozi vidiyovideo atụmatụvidiyo maka azụmahịa